MAHAFINY Grumman S2F-3 Tracker FSX & P3D Package - Rikoooo
Downloads 16 467
Mpanoratra: Milton Shupe - Eagle Rotorcraft Simulations
Voalohany natsangana ho an'ny FS2004 avy amin'i Milton Shupe, ity FSX Grumman S2F-3 dia FSX fanavaozana ny teratany any am-piandohana. The FSX S2F-3 dia feno FSX/P3D miara-miasa sy mampiasa tombontsoa maro FSX-ny endri-javatra, anisan'izany ny sarintany sy ny sarintany.
Ny Grumman S-2 Tracker (teo aloha antsoina hoe S2F) no fiaramanidina voalohany natao ho an'ny ady anaty akata (ASW) ho entina manompo ao amin'ny tafika amerikana. Ny andiany voalohany, ny AF-2 Guardian no voalohany natsangana ho ady ady an-habakabaka, saingy nampiasa dikan-teny roa, fitaovana fitaterana fandefasana fiara ary fitaovam-piadiana hafa.
S-2 dia ankehitriny amin'ny endriky ny kambana-maotera, avo-elatra amin'ny elongations mahery. Izany no fitaovana amin'ny fipetrahana fitaovana bisikiletany, roa Helisin'ny Wright rivodoza R-1820 miasa telo-bladed Helisin'ny.
Saraha-tara-pahazavana, sarintany, ary sarintany manokana
2 liveries - nihazakazaka, dia USN
DirectX 10 Rehefa Jerena